Ururka Suxufiyiinta somaliland ee Solja oo Qodobo aad ugu Muhiim ah ka soo Saaray Shirka Hogaanka Ururku uu Yeesho Xaaladaha Horumarineed ee Warbaahinta somaliland iyo Tayadooda. - Haldoornews
War-saxaafadeed: Baaq iyo Talo-soo-jeedin
• In Guddoomiyaha Maxkamadd sare ee dastuuriga ah laga codsado in uu gudagalo Dacwadii ururku ku doonayey in lagu fasiro qoddobka 10aad ee xeerka saxaafadda, kaasoo jidaynaya in Dacwadaha ka dhanka ah suxufiyiinta loo maro nidaanka Madaniga ah, kaasoo aanay Garsoorka iyo Xukuumaddu wali dhaqan-galin.
• In xukuumadda mar kale laga dalbado sidii ay sanadkan u suurtogalin lahayn xaruntii Tababarada Suxufiyiinta Somaliland, kaasoo ay balanqaaday sanadkan 2016-ka.
• In kulan deg deg ah ay yeeshaan Saxaafadda iyo hay’addaha xukuumadda ee ay khusayso arrinta saxaafadda si la mid ah kii sanadkii hore isla markaana wax la iska weydiiyo waxa ka fulay balamihii ay labada dhinac qaadeen.
• In la xoojiyo difaacida iyo u doodista suxufiyiinta iyo xorriyatul-qawlka isla markaana la dar dar galiyo sidii hoos loogu dhigi lahaa cabashooyinka dhinac kasta ka jirta.
Daawo Sawirrada Salaadii Ciida Magaalada Kassel ee Dalka Jarmalka iyo Jawigii Sallaada ee Saaka Masaajidka Somalida ee Towba.